I-CHIC LUXURY FARM HLALA~ AC/Eshushu/Wifi/Farm Food
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguHoney
Ukuhlala kwiFama eNtofontofo eTapovan, Dharamshala.
Isetwe kwindawo enehlathi yaseDharamshala, i-Owl's Nest™ yindlu entle enazo zonke izinto zangoku kunye neendawo ezininzi ezivulekileyo. Ifanele ngokufanelekileyo iintsapho ezincinci zenyukliya, okanye amaqela abahlobo abahamba kunye. Ibekwe kwifama yeehektare ezi-1, le ndlu inomtsalane iqhayisa ngezinto zangaphakathi ezikumgangatho ophantsi kunye nokukhanya okuninzi kwendalo kunye nezitiya ezihonjiswe kakuhle. Ngendlu enye kwifama yonke, iindwendwe kwindlwane ziba zizodwa.
Ndingakhuthaza iindwendwe ukuba zithathe imizuzu embalwa kwaye zifunde inkcazo eneenkcukacha kunye nophononongo lweendwendwe malunga nokuhlala kwam efama phambi kokubhukisha.
Indawo yokuhlala yasefama yabucala ngokupheleleyo eDharamshala, kufutshane nazo zonke iindawo zabakhenkethi kodwa zithe cwaka ngokuzolileyo. Apha ekuphela kwezandi oya kusiva ngezandi zeentaka. Le yiparadesi yabafundi kunye nababukele iintaka.
Indlu encinci ye-fusion yangoku kunye neyoluntu ime kwi-acre yomhlaba ejikelezwe ngamahlathi. Iindwendwe ezihlala efama zinendawo yazo zonke zibanika ubumfihlo obungathintelwanga kunye nokuzola. Abanakekeli bahlala kwisango kwaye bafowunelwa nje ukuba bancede iindwendwe ngayo nantoni na eziyifunayo.
Ngaphandle kwendawo yokutyela epholileyo, indawo yokuhlala enelanga kunye nenhle enendawo yomlilo, igumbi lelanga eliqaqambileyo elineefestile zaseFransi, iindwendwe zinokufikelela kwiindawo ezininzi zokuhlala ngaphandle ecaleni kwechibi leentlanzi, nokunye.
Igumbi lokulala eliphambili linebhedi enkulu kunye negumbi lokuhlambela elincanyathiselweyo. Eli gumbi lokulala likwanesifundo esikhulu esineefestile zesiFrentshi ezijonge igadi yangaphambili kunye nehlathi.
Igumbi le-2nd linendawo ephezulu ephezulu ngaphezulu kwegumbi lokuhlala kwaye linebhedi enkulu, indawo yokuhlala kunye neyoga.
Kukho amagumbi okuhlambela amabini. Enye ifakwe kwi-suite enkulu yokulala kwaye igumbi lokuhlambela le-2 alikho ngaphakathi kwi-cottage. Igumbi lokuhlambela le-2 lingaphandle, ecaleni kwendawo ye-BBQ. Omabini amagumbi okuhlambela anamanzi ashushu nabandayo kunye neeshawari.
I-MIND CAVE-Incanyathiselwe kwigumbi eliphambili lokulala yindawo ephezulu esiyibiza ngokuba yi "Mind Cave". Yindawo encinci epholileyo ephezulu elungele abo bangathanda ukuqhawula kuzo zonke iziphazamiso kwaye bachithe ixesha elithile becamngca okanye befunda okanye beziqhelanisa nokuqaphela.
Sinonxibelelwano lwe-WiFi olunesantya esiphezulu seBroadband olugubungela yonke i-cottage kunye neendawo ezininzi zegadi.
>>>>>>UKUCOCWA KWEMIHLA NGEMIHLA NELINEN <<<<<<
~ Ilinen eNtsha ibonelelwa ngexesha lokungena ize itshintshwe emva kweentsuku ezi-3 kwiindwendwe ezihlala ixesha elide.
Indlwana iyacocwa kwaye ibonelelwa kanye ngentsasa nganye emva kwesidlo sakusasa, ngabasebenzi basefama abahlala kwindlu engaphandle kwipropati. Qaphela - Ukucoca i-cottage, izitya, kunye nezinye izinto amaxesha amaninzi ngemini akuyi kwenzeka.
>>>>>>UKHETHO LOKUTYA EFAMENI<<<<<<
A) Ikhitshi lixhotyiswe ngokupheleleyo ukuze iindwendwe zikwazi ukuziphekela. Abakhathaleli baya kunceda ukufumana izithako. Banike nje uluhlu lwezinto ozidingayo kunye nemali. Abanakekeli baya kucoca ikhitshi kanye rhoqo kusasa.
B) Iindwendwe zinokucela abasebenzi ukuba banikeze isidlo sakusasa ESIQHELEKILEYO kunye neSidlo sangokuhlwa. Balungiselela ukutya okulula okwenziwe ekhaya kweVegetarian yaseIndiya ekhitshini lasefama kwaye bakuzise kwindlwana. Asinayo imenyu, kwaye iintsuku zesidlo sakusasa kunye nesidlo sangokuhlwa sixhomekeke koko sikuvune kutsha nje kwifama yethu.
Qaphela - Asinikezeli isidlo sasemini, i-snacks, iti okanye ikofu njl.njl emini. Eyethu yifama esebenza ngokupheleleyo kwaye abagcini baxakekile besebenza nezityalo emini. Sicela iindwendwe ukuba zizincede ekhitshini le-cottage kwizinto ezinjalo.
C) Iindwendwe zinokuodola ngokusebenzisa iZomato, iSwiggy okanye ngokutya kwengingqi ezisa efama.
Khumbula ukungathathi nto ngaphandle kweenkumbulo kwaye ungashiyi nto ngasemva ngaphandle kweenyawo :-)
AMANQAKU ABALULEKILEYO -
1) NGOKUQINISO AKUKHO IZIGANEKO ZIVUMELEKILEYO
2) Indawo yokuhlala yaBaqhubi ekhoyo efama. Ukuba kufuneka indawo yokuhlala yabaqhubi, nceda usazise kwangaphambili ukuze senze amalungiselelo ngokufanelekileyo.
3) Abangaphandle kunye neendwendwe azivumelekanga ngokungqongqo. Kuphela ziindwendwe ezibhukishelwe kwa-Airbnb ezinokungena efama nakwindlwana encinane.
4) Le yindlwana yasefama, kwindawo yelali. Asiwuvumeli umculo ongxolayo okanye ingxolo emva kokutshona kwelanga. Sinabamelwane beelali kwaye sicela iindwendwe zethu ukuba zigcine uxolo kunye nokuzola kwefama kunye neendawo eziyingqongileyo.
Ipropathi ijikelezwe lihlathi elishinyeneyo lompayini kwaye ifihliwe kude nendawo yokhenketho eqhelekileyo kunye neendawo ezixineneyo zaseDharamshala, kodwa zonke izibonelelo kunye neendawo zokutyelela kukuhamba okufutshane ukusuka apha. Le yindlwana esefama, kukho izilwanyana ezifana neenkomo, iinkuku, nezinja ebumelwaneni.
Umbuki zindwendwe ngu- Honey
Ndihlala ndifumaneka efowunini / kuwhatsapp